အဆိုပါလေ့လာရေးအကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဆောင်းပါးများ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သက်ဆိုင်ရာသုတေသန - ပထမ ဦး စွာ YBOP မှတောင်းဆိုမှုများကိုထောက်ခံသည့်လေ့လာမှုစာရင်းရှိသည်။ (ကြည့်ပါ မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး သူတို့ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုဘယ်အရာကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမြင့်မားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာတမ်းများအတွက်) ။
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 57 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ။ အားလုံးမဟုတ်တ ဦး တည်းကသူတို့တွေ့ရှိချက်များပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများမှာအစီရင်ခံအာရုံကြောတွေ့ရှိချက်များကိုထင်အဖြစ်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 34 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? လေ့လာမှု ၈၀ ကျော်သည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်. အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးမျိုးကျေနပ်မှု။ အချို့သောလေ့လာမှုများကအမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှုအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအများစုမှာမူ do ဆိုးကျိုးများကိုအစီရင်ခံပါ arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 280 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်, ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 17။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
ပွိုင့်ခြင်းနှင့်ချယ်ရီ-ကောက်ယူလေ့လာမှုကဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုတွေ့မြင်ပြောနေတာနီးပါးတိုင်း naysayer တစ် debunking များအတွက်: "Debunkingအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဆဲ Porn အကဲခတ်အကြောင်းဒါကြောင့်စိုးရိမ်နေ Are? "မာတီ Klein, တေလာ Kohut နှင့်နီကိုးလ် Prause (2018) က။ ဘက်လိုက်ဆောင်းပါးတွေကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို: သူတို့ကကိုးကား Prause et al။ , 2015 (မဟုတ်မမှန်က porn စွဲ debunks ဟုဆိုကာ), ညစ်ညမ်းစွဲထောက်ပံ့ 50 အာရုံကြောလေ့လာမှုများကျော်ချန်လှပ်စဉ်။ ညစ်ညမ်းသောသုတေသီများ (သို့) ဘလော့ဂါများမှထုတ်လွှင့်သောဒဏ္myာရီများစွာကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည့်တင်ဆက်နည်းများကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူစေရန် Gabe Deem ၏အလွန်ကောင်းမွန်သောဗီဒီယို ၂ ခုကိုကြည့်ပါ။ "PORN ဒဏ္THာရီများ - စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏နောက်ကွယ်ရှိအမှန်တရား"နှင့်Porn Playbook: Deny၊ Disinform and Defame"။
နှစ်ခုဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များအားဖြင့်ဒီ 2015 စက္ကူကိုကြည့်ပါ: တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015)တစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးရာ ဇယား ကြောင်းတိကျသောဝေဖန်မှုများအပေါ်ကြာသူတို့ကိုတန်ပြန်ကြောင်းကားအညွှန်းပေးထားပါတယ်။
အင်တာနက်စွဲခွဲအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်. neuroscience စာပေ၏စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်နှင့်အတူတွေ့ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)မရ။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကိုရည်ညွှန်းသည်ဟူသောမကြာသေးမီကခေါင်းစီးဖမ်း EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုကိုလည်းဝေဖန်သည်။ (ကြည့်ပါ ဒီစာမျက်နှာ ဝေဖန်မှုများနှင့်မြင့်မားမေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်)
တစ်ဦးကအတိုပြန်လည်သုံးသပ် - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (2016) - အရာကောက်ချက်ချ: "ပေးထား CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီ, ကြားဝင် စွဲလမ်းမှုကိုအဘို့အထိရောက်သောအရှင်သည် CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်စေခြင်းငှါ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု တိုက်ရိုက်။ "
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ Neurobiology - တစ်ဦးကလက်တွေ့သုံးသပ်မှု (De Sousa & Lodha, 2017) - ကောက်နှုတ်ချက်: စုစုပေါင်း 59 ဆောင်းပါးများသုံးသပ်ချက်များ, mini ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းပါသည်, စွဲလမ်းနှင့် neurobiology များ၏ကိစ္စရပ်များတွင်မူရင်းသုတေသနစာတမ်းများထည့်သွင်းထားတဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါသုတေသနစာတမ်းများညစ်ညမ်းစွဲများအတွက် neurobiological အခြေခံ elucidated သောသူတို့အပျေါဗဟိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ကြည့်ရှုမယ့်စိတ်ပျက်စရာလက္ခဏာသည်အဘယ်မှာရှိလူနာများနှင့်အတူပုံမှန်အလုပ်မလုပ်သူစာရေးဆရာနှစ်ဦးစလုံး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်တွေ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2018) ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၏တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှု - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်: မကြာမီက neurobiological လေ့လာမှုများ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ CSBD ၏အနည်းငယ် neurobiological လေ့လာမှုများယနေ့အထိကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒေတာထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်ကဲ့သို့သောအခြားဖြည့်စွက်အတူ neurobiological မူမမှန်ရှယ်ယာ Community အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိဒေတာသည်၎င်း၏ခွဲခြားတဲ့အမူအကျင့်စွဲထက်တစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ပိုကောင်းတော်ပါတယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ - စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၁) - ကောက်နှုတ်ချက်: လက်ရှိစာတမ်းတွင် PPU ၏အခြေခံသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၂၁ ခုမှရရှိသောအထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်။ ပြုစုသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် PPU သည် (က) လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုဂရုပြုခြင်း၊ (ခ) ချို့တဲ့သောတားစီးထိန်းချုပ်မှု (အထူးသဖြင့်မော်တာတုံ့ပြန်မှုတားစီးခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများမှအာရုံစိုက်မှုကိုဆီလျော်မှုမရှိခြင်း)၊ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ()) ဆုံးဖြတ်ချက်ချချို့ယွင်း။
ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများအတွက်အဓိကအခြေခံစွဲ-စေသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုနေသောခေါင်းစဉ်: 1) အသိ, 2) Desensitization, 3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality), 4) အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4သည့်ကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံ -based လေ့လာမှုများ 55 ကျော်:
အသိ (cue-reactivity & cravings) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အကျိုးအမြတ်ရှာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဆားကစ်များသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောအမှတ်တရများ (သို့) သတိများကိုအလွန်အမင်းအာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသည်။ ဤရလဒ်သည် နုတ်မ like နှိပ်သို့မဟုတ်အပျြောအပါးနေချိန်တွင် "လို" သို့မဟုတ်တဏှာတိုးလာ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သော, ကွန်ပျူတာဖွင့်တဲ့ pop-up ကိုမြင်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်တွေကို, porn အဘို့မတရားသောလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲပြင်းထန်သောဖြစ်ပေါ်။ တချို့က ': porn တစ်ဦးတည်းသာလွတ်မြောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဝင်' 'အဖြစ်ထိခိုက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖော်ပြရန်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးအလုအယက်, လျင်မြန်သောနှလုံးခုန်ပင်တုန်လှုပ်, သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးပြွန် site ကိုပေါ်သို့ logging ဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတယ်။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်ာင်းသို့မဟုတ် cue-reactivity ကိုသတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Desensitization (အကျိုးခံစားခွင့်လျှော့ချနိုင်မှုနှင့်ခံနိုင်မှုလျော့နည်းလာခြင်း) - ၎င်းတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီမှထွက်ခွာသွားသောရေရှည်ဓာတုဗေဒနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများပါဝင်သည် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့။ Desensitization ကိုမကြာခဏတူညီတဲ့တုန့်ပြန်အောင်မြင်ရန်မြင့်မားထိုးသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်သောသည်းခံစိတ်အဖြစ်တငျပွ။ တချို့က porn သုံးစွဲသူများ edging masturbating မဟုတ်သည့်အခါစောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုအတွက်ရှာဖွေနေမှတဆင့်အစည်းအဝေးများရှည်ရှည်, အွန်လိုင်းကိုပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ Desensitization လည်းတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲများနှင့်လူစိမ်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်စိတ်ပျက်ဖွယ်အသစ်ကအမျိုးအစားမှမြင့်တက်၏ပုံစံယူနိုင်ပါတယ်။ ထိတ်လန့်, အံ့သြစရာသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်အားလုံး dopamine ခြီးမွှောနှင့်လိင်စိတ်နိုးထဆုတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လေ့လာမှုများ "လေ့" ဟူသောဝေါဟာရကိုကိုသုံးပါ - ယန္တရားများသို့မဟုတ်စွဲလမ်းယန္တရားများသင်ယူခြင်းပါဝင်ရသော။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက် desensitization သို့မဟုတ်လေ့သတင်းပို့လေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (အားနည်းသောစွမ်းအား + စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းစေခြင်း) - အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal cortex ၏လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲစေသည့်စိတ်ဆန္ဒထိန်းချုပ်မှုကိုလျှော့ချစေပြီးပိုမိုသုံးစွဲလိုသောဆန္ဒများရှိသည်။ အလုပ်မဖြစ်သော prefrontal ဆားကစ်များသည်သင့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသည်စစ်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောခံစားချက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအထိခိုက်ခံစွဲလမ်းများ '' ဟုတ်ကဲ့! '' ဟုအော်ဟစ်နေကြသည် မင်းရဲ့ ဦး နှောက်က 'မဟုတ်ဘူး၊ နောက်တစ်ခါမဟုတ်ဘူး' လို့ပြောနေတုန်း သင့် ဦး နှောက်၏အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းများသည်အားနည်းသောအခြေအနေတွင်ရှိနေစဉ်စွဲလမ်းများသည်များသောအားဖြင့်အနိုင်ရသည်။ ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functioning (hypofrontality) သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲများတွင်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
ချွတ်ယွင်းနေစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်က (ပိုမိုစွဲလမ်းခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများ) - စွဲလမ်းမှုသည်ကျွမ်းကျင်သူများကစွဲလမ်းမှုကို ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလည်ပတ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများ (cortisol နှင့် adrenaline) တို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါဟုရှုမြင်ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းသောစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်တစ်ခုကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးသောစိတ်ဖိအားကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက ဦး နှောက်၏စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များကိုသက်ဝင်စေပြီးစိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အလွန်အကျွံတက်ကြွစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု impulse ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုအပြည့်အဝနားလညျနိုငျအပါအဝင် prefrontal cortex နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတားဆီး။ porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲတစ်ခုအလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု system ကိုညွှန်ပြလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5.
ခေတ္တမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလျော့နည်းဆုလာဘ် system ကို activation ဆက်နွယ်နေကြောင်း သာ. ကွီးမွတျ porn အသုံးပြုခြင်း။
ဦးထက်ပိုသောကွောငျ့အငျတာနကျ porn အသုံးပြုသူများအပေါ်လေ့လာမှုများအံ့သြစရာမရှိပါအဖြစ်လာသင့်တယ် 370 + ဦးနှောက် လေ့လာမှုတွေ ထို့အပြင် "အင်တာနက်ကိုစွဲ" ဟုဖွံ့ဖြိုးကြောင်းအတည်ပြု တူညီတဲ့အဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ ကြောင်းအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာကိုပိုမိုအကဲဖြတ်-based အင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများဦးနှောက်လေ့လာမှုများတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုကို back up ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ collection များကိုကြည့်ရှုပါ:
ညစ်ညမ်း ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာကို ခံစားနေရသူတိုင်းသည် စွဲလမ်းသူမဟုတ်ပေ။ အွန်လိုင်း ညစ်ညမ်းကို သုံးစွဲသူများက ၎င်းတို့၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုကို အေးစက်စေခြင်းကြောင့် ပြဿနာများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံရသည်။ နောက်ထပ်ကြည့်ရန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုက်.
စွဲလမ်း - အထွေထွေ
Dopamine: အသစ်အဆန်းများ, Salience, မြျှောလငျ့ချိုးဖောက်ခြင်း
အသစ်အဆန်း, Impulse နှင့်အန္တရာယ် Takers
Porn ကြည့်ခြင်း - ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများ (ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်း / စွဲခြင်းမဟုတ်သောလေ့လာမှုများမဟုတ်)
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုအဆိုပါလေ့လာရေးအကြောင်းသက်ဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဆောင်းပါးများ"
Pingback: အဘယ်ကြောင့် "စွဲ" ဟူသောစကားလုံးသည်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သနည်း - Truth Joy အလှအပ
Pingback: апорноигле - dianasaratov
Pingback: ငါတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့သတိပေးချက်တစ်ခု The Porn Ditch